5 Best Ọnọdụ Iji Gaa N'ihi Ekele Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Ọnọdụ Iji Gaa N'ihi Ekele Na Europe
Ekele mgbe a nnọọ omenala ezumike agba gburugburu gburugburu ezinụlọ, toro toro, na football. Otú ọ dị, ndị n'etiti unu ndị na-enwe obi ụtọ njem ma nwee ike iji ọsọ ọsọ kwesịrị ịtụle itinye oge ezumike afọ a n'otu n'ime obodo ndị a kachasị mma ileta maka inye ekele na Europe.
The ochie Afrika nwere Best Ọnọdụ ka Gaa maka Ekele. N'agbanyeghị na kọntinent nke Europe bụ nnukwu, naanị a họrọ di na nwunye nke obodo ndị ezi fabulous ileta maka Ekele.
Europe na-abụkarị mmadụ karịrị akarị na njem nleta, ma otu enweghị ike ikwu otu ihe ahụ mbubreyo November. Ọ bụ ya mere akụkụ nke afọ a ji bụrụ oge zuru oke iji gaa obodo ochie ma weghachite ọdịnala Ekele na nnukwu nri na agba ndị mara mma.
Ma ị na-American ma ọ bụ European, ndị na-esonụ ndepụta obodo kwesịrị gị n'elu ebe on na gburugburu Ekele.
Iji na-amalite anyị njem Best Ọnọdụ ka Gaa maka Ekele anyị ẹmende – eji, Belgium
Iji na-etinye ya obere, Bruges bụ ezigbo kpokọtara obodo na-abịa site ụfọdụ ochie fairytale. ndammana, ochie obodo bụ ebe nile mara mma ụgha. Ọ na-abịa site na Medieval oge, na ebe a ị ga-ahụ a otutu oge ochie ma mesmerizing ụlọ.
Ị nwere ike iri a ụgbọ mmiri siri site na obodo ahụ bụ adịgboroja ọwa mmiri na-ele anya na-eche na ihe niile nke akwụkwọ-kpuchie ụlọ. Ihe bụ ihe ọzọ, n'ihi na ọ bụ November, ihe niile anya mmezi dreamlike ruru niile mara mma ọdịda agba.
Ị nwere ike ghara ịga na-ezighị ezi site na ịga Bruges maka a Ekele na Europe. Ị pụrụ ọbụna hop na a ụgbọ okporo ígwè na obodo a mee dum ahụmahụ extra ịrịba! and we are sure as soon as you complete your holiday, ị ga-eso nke a 5 Best Ọnọdụ ka Gaa maka Ekele na Europe blog post.
Rotterdam na Bruges Ụgbọ oloko
Utrecht na Bruges Ụgbọ oloko
The Hague ka Bruges Ụgbọ oloko
Norway bụ n'ebe dị anya na oyi na-atụ n'ebe ugwu, ma Oslo bụ ekele na n'ebe ndịda akụkụ nke mba. The obodo bụ otú a zuru okè ebe maka ndị hụrụ ya n'anya oyi ihu igwe ma ka nwere ike na-ama jijiji oyi nke Norway.
Oslo bụ n'ezie breathtaking na nke akụkụ a nke afọ n'ihi niile n'ike anwansị mma. Plus, ị ga-esi na-ahụ Northern Ìhè nke na-kacha mma hụrụ na a na mba, n'ihi ya, ihe ndị ọzọ nwere ike a onye mkpa?
I nwere ike ịhụ omenala Ekele ụdị nri ị na-eji na-, ma ahụmahụ ị ga-esi nwere bụ karịa kwesịrị ya. N'agbanyeghị na menu bụghị dị ka iche iche dị ka ị ga-amasị chọrọ, na Norwegians ka nwere ọtụtụ ihe na-akpali akpali nri na-enye. Ọmụmaatụ, mgbe bụ omenala Norwegian hotdog. Otú ọ dị, ọ esiri beef ngwaahịa na ọbọp ke lefse, a flatbread mere si ntụ ọka, nduku, na mmiri ara ehi.
Si pụtara n'ihu ọha ogige ntụrụndụ na ndị agadi ewusiri ike ka Viking ngosi ihe mgbe ochie, ị ga-a ọtụtụ ime na Oslo. Anyị ji n'aka na ị ga-chọrọ na-eji ihe karịrị nanị ụbọchị ole na ole na a ebube obodo.
Oslo is our most north pick for 5 Best Ọnọdụ ka Gaa maka Ekele na Europe.
Ị apụghị ikwu London. Onye ọ bụla nụrụ banyere ya, na onye ọ bụla hụrụ ya. Gịnị bụ ọbụna mma, ị ga-ada na ịhụnanya na ya na ọdịda. The obodo bụ nnukwu, kama ebe e na offseason bụ a zuru okè oge gara ụfọdụ nke na-emekarị mmadụ jupụtara ebe.
Ụbara ihe eme n'oge a nke afọ, ma ọ bụrụ na ị na-eme na-akwado, ị ga-n'anya London. Ọzọkwa, na ogige ntụrụndụ na mgbụsị akwụkwọ nwere ihe karịrị ihe ịtụnanya. Kensington Gardens, Greenwich Park, na Windsor Great Park bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ ọdịdị eluigwe ị ga-achọ ka gaa.
Ndị gị na-atụle ihe oriri na-akụkụ dị oké mkpa nke na-Ekele, ị ga-enweta oke gị na London. The nri idaha ebe a bụ nnukwu na dị iche iche dị ka onye na azụ n'ime isi obodo na-ekwu,. A ga-enwe ihe maka onye ọ bụla uto.
The akụkụ kasị mma banyere ejegharị ejegharị na-London bụ na e nwere ọtụtụ ama ụgbọ okporo ígwè edoghi na-aga site continental Europe na London, dị ka ndị si Amsterdam, Paris, na Berlin, niile nke na-enye a dị ebube ahụmahụ nke nlegharị anya na obodo na-agafe Eurotunnel n'okpuru English Channel ma ọ bụ dị ka ndị French na-akpọ ya - La Manche.
Ị na-maara banyere Switzerland, na na ọ bụ kpokọtara ugwu, ma ị yikarịrị anụbeghị banyere Lugano. Ọ bụ a ọmarịcha obodo dị n'ebe ndịda Switzerland, nso ókè na Italy.
The obodo bụ dị n'ikperé a mesmerizingly-acha anụnụ anụnụ ọdọ na ala nke Alps, nke na-ada fọrọ nke nta kpokọtara. eziokwu naanị ga-ezu ka i na-eji gị na-Ekele na Europe nri e, Lugano is our most unique pick in Best Cities to Visit for Thanksgiving.
Ọzọkwa, ejegharị ejegharị na-na site na nke a obodo via ụgbọ okporo ígwè bụ a pụtara ìhè ahụmahụ na ya. Nke ahụ bụ ma eleghị anya, ụzọ kasị mma-enwe mma nke onye nke kasị nnọọ mma n'ógbè Europe. Ọzọkwa, i ga-ebi njem n'ihi na nke mma ụgbọ oloko onwe ha, dị ka Switzerland nwere otu n'ime kasị mma ụgbọ oloko na Europe.
Basel ka Lugano Ụgbọ oloko
Bern ka Lugano Ụgbọ oloko
Lucerne ka Lugano Ụgbọ oloko
Zurich ka Lugano Ụgbọ oloko
Anyị apụghị imeli ikwu ebighi-ebi n'obodo ọkụ. Paris bụ mgbe otu n'ime ndị kasị gara obodo na ụwa maka a mere. Otú ọ dị, ọ na-ụzọ nke jupụtara nke bụ ya mere mbubreyo November bụ zuru okè oge gara. Plus, ị ga-emetụta ndị spellbinding ọdịda agba.
Ihe bụ ihe ọzọ, Paris na November bụ a paradise maka Instagramers. Ị ga-enwe ike ịkwụsị na-ewere foto mgbe ị na-ebe a. Opekempe, ga-hụ na ị ga-esi a njem nke ị ga-echeta ruo mgbe ebighị ebi.
Ma ihe ndị nri, ọma, ị mara otú ọ dị na France; ma e wezụga, Paris bụ gastronomic isi obodo nke ụwa. Recreating a Ekele ga otú ịbụ nnọọ mfe, ị ga-enweta a ohere tinye a njali elu ya. Ị ga-enwe ike ime na ebe ọzọ. naanị Paris ike na-enye nri na nlegharị anya na ga astonish ọbụna pickiest njem.
The naanị ihe nwere ike mma njem bụ enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè na-aga site French obodo. Ọ ga-abụ ihe kasị mma ahụmahụ!
Emefu Best Ekele na Best Ọnọdụ ka Gaa maka Ekele na Europe
Anyị nwere ike ịga na na na-ekwu okwu banyere obodo ndị a. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịgwa gị banyere n'ebe ndị ọzọ na kwesịkwara gị patronage gburugburu Ekele. The dum Bavarian n'ógbè Germany, na North nke Italy na Milan karịsịa, Scotland, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ekele na Europe pụrụ ịbụ ahụmahụ kwesịrị ncheta na nke ọ bụla n'ebe ndị a.
Ebe ọ bụla ị na-ekpebi na-aga na njedebe, ị kwesịrị ị na-atụle ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè. Dị ka anyị kwuru otutu ugboro, ụfọdụ n'ime ndị a na ebe ga-enye gị ihe ezi zuru ahụmahụ ma ị gaa ileta ha site okporo ígwè. Naanị otú ahụ ka ị ga-enwe ike iji na-enweta anwansi nke Europe n'ezie. Kpọtụrụ Save A Train na-esi gị tiketi ka anya dị ka o kwere omume n'ihi na Ekele bụ fọrọ nke nta ebe a!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / de na / fr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.
europetravel London longtrainjourneys ekele Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem njegharị travelfrance travelnorway travelswitzerland
Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe